सारुक र मनिषसँग मलिनाको रोमान्टिक पल (भिडियो) | THE CINEMA TIMES
NepalNews Author:	The Cinema Times - Sep 7, 2017
सारुक र मनिषसँग मलिनाको रोमान्टिक पल (भिडियो)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । दयाराम दाहाल निर्देशित सिनेमा ‘रानी’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘भन भन…’ बोलको रोमान्टिक गीतमा नव-कलाकार सारुक ताम्राकार, मनिषसुन्दर श्रेष्ठ र अभिनेत्री मलिना जोशीको प्रेम देखाइएको छ ।
विजय घिमिरेको शब्द/संगीत रहेको सिनेमामा निकिता थापा र संगीतकार स्वयम्कै स्वर समावेश छ । भानु महर्जनको प्रस्तुतिमा विमलमान गुभाजुले निर्माण गरेको सिनेमा कार्तिक २ गते रिलिज हुदैछ । सिनेमामा गीतमा फिचरिङ कलाकारका अलावा अनुपविक्रम शाहीको पनि मुख्य भूमिका छ ।
Tags:Malina Joshi, manish sundar shrestha, saruk tamrakar
सारुक र मनिषसँग मलिनाको रोमान्टिक पल (भिडियो)0out of5based on0ratings.0user reviews.
पल र पूजाको दुई सिनेमा घोषणा, ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ बन्ने
Nepal	Sep 15, 2017
हलमा ‘जोनी जेन्टलम्यान’ र ‘लीला’
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । यो साता हलमा दुई नेपाली सिनेमा प्रदर्शनमा आएका छन् । नितिन…
Nepal	Aug 29, 2017
प्रेमकथाको ‘रानी’मा अनुपविक्रमको भूमिका के ? (टिजर)
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ । दयाराम दाहाल निर्देशित सिनेमा ‘रानी’को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ ।…